Ngokuvamile, sithenga izinto zokuhlanza indlu ukuze simunce udoti, kepha empeleni, izinto eziningi azinakunconywa, futhi kungenzeka awazi kahle. Ngakho-ke namuhla sizoxoxa ngalokho okungenakuncanywa ngabahlanzi bokuhlanza. Khumbula ukubhekisisa futhi ungenzi lutho oluyingozi ku-vacuu ...
Njengomshini oyinhloko wokuhlanza indlu - umshini wokuhlanza, udlala indima ebaluleke kakhulu, cishe yonke imindeni iyithuluzi elidingekayo. I-vacuum cleaner kulula ukuyisebenzisa, kepha abantu abaningi abakuthandi ukuhlanzwa nokugcinwa kwe-vacuum cleaner. Ake sifunde ukuhlanza nokunakekela ...
Ifektri yethu ibineminyaka eyi-10, futhi sihlala sizama konke okusemandleni ukuhlinzeka ngemikhiqizo efanelekile kumakhasimende ethu, sihlola zonke izingcezu ngaphambi kokuthumela, sithemba ukuthi yonke into esesandleni samakhasimende ethu yinhle futhi iyafaneleka. Imikhiqizo yabantu abadala ayanele, ukuze uthole ...